Xashiishadda Aurora ee Shiinaha ayaa 1.7 milyan oo cagood oo laba jibbaaran oo behemoth ah ku iibisa warshadda aagga iibka iyo alaab -qeybiyeyaasha | Aixiang
Aurora Cannabis waxay qorsheyneysaa inay dejiso mid ka mid ah kuwa ugu waaweyn uguna qaalisan ee lagu koriyo xashiishadda taariikhda, laakiin qof kasta oo iibsada ayaa laga yaabaa inuu ku mashquulo inuu helo kharash badan si mashruuca si guul leh loogu dhammeeyo.
Sida laga soo xigtay agabyada xayeysiinta ee si guud loo heli karo, Aurora waxay ku maalgelisay 260 milyan oo doolarka Kanada ah (205 milyan oo doollarka Mareykanka ah) "dhammaan loo dhan yahay" oo galay 1.7 milyan oo cagood oo laba jibbaaran oo ku yaal Daawada Hat, Alberta, halkaas oo shirkaddu xarun u ahaan doonto Colliers International, oo ku taal Toronto, wuxuu ku qoran yahay la -taliye maaliyadeed iyo wakiilka liis -gareynta hantida ma -guurtada ah ee la dhammaystiray.
Si kastaba ha noqotee, haddii iibsaduhu dhammaystiro adeegsiga asalka ah ee aqalka dhirta lagu koriyo ("oo ah xarun-cagaaran-heer-heer-caafimaad oo heer sare ah"), waxay u baahan kartaa malaayiin doollar kharash dheeraad ah, iyo haddii loo dhammaystiro non-cannabis isticmaalka, waxay u baahan kartaa kharash yar.
Liiskan ayaa ah tusaalahii ugu dambeeyay ee ka bixitaankii ballaarnaa ee soosaaraha ugu weynaa ee Kanada laga soo saaray aqalka dhirta lagu koriyo ee xashiishadda oo aad u weyn sannadkii la soo dhaafay, soo-saarahana aad buu u dhaafay dhul-beereedka intii u dhexeysay 2017 iyo 2019.
Sida laga soo xigtay warbixinta "Ganacsiga Xashiishadda Maalinlaha ah", qaar badan oo ka mid ah mashaariicdan aqalka dhirta lagu koriyo, ha ahaadeen kuwo lagu dhisay isku -biirinta iyo iibsiga ama lagu dhammeeyay isku -darka iyo iibsiga, aakhirkii waxay sababeen soo -saareyaasha ruqsadda haysta ee Kanada inay si toos ah u la kulmaan wadar ahaan malaayiin doollar khasaaraha hantida maguurtada ah iyo balaayiin ee doolarka. Qoritaanka alaabada.
Cinwaanka ku yaal buug -yaraha Alberta Greenhouse wuxuu u dhigmaa cinwaanka ay isticmaashay dhismaha Aurora Sun.
MJBizDaily waxay ogaatay in Aurora ay si wax ku ool ah u joojisay adeegsiga aqalka dhirta lagu koriyo ee Aurora Sun sannadkii hore, waxayna hantida u keenaysaa suuqa iyada oo aan lahayn "qiimaha daahfurka" dhibaatada weydiinta qiimaha. Tani waxay gacan ka geysan doontaa go'aaminta qiimaha hantida ee suuqyada kacsan.
Sida ku cad buug -yarahan, "dhammaystirka yoolka" ayaa lagu taxay dhammaadka rubuc -labaad ilaa bilowga rubuc -saddexaad ee sannadkan.
Tallaabadan ayaa imaanaysa hal sano kadib markii Aurora uu aqbalay dalabkeedii ahaa in lagu koriyo aqalka weyn ee Exeter, Ontario, dalabkuna waa kala bar qiimaha liiskiisa C $ 17 milyan ah iyo saddex meelood hal meel qiimaha iibsiga asalka ah.
Qoraal emayl ah oo uu u diray MJBizDaily, afhayeen ayaa xusay in Aurora "uu si joogto ah u fiirinayo shabakadda ka shaqaysa shirkadda si loo hubiyo inay ku habboon tahay meheraddeena hadda iyo muddada gaaban."
Bayaanku wuxuu sii watay: "Iyada oo laga jawaabayo isbeddellada ugu dambeeyay ee warshadaha iyo shuruudahayaga istiraatiijiyadeed, shirkaddu waxay ku dhawaaqday inay si aan xad lahayn u hakinayso howlihii Aurora Sun ee Daawada Koofiyadda, Alberta."
"Waxaan si firfircoon u dhiirrigelinaynaa adeegsiga beddelka ah ee xarunta. Ma jiro macluumaad intaas ka faahfaahsan waqtigan sababtoo ah habsocodku weli wuxuu marayaa marxaladihiisii ​​hore."
Iibintu waa dhisme weyn oo ah 1.4 milyan oo lugood oo laba jibbaaran iyo dhisme kaabayaal ah oo ah laba jibbaaran 285,000.
Sida ku cad buug -yaraha, iibiyaha (Aurora kiiskan) wuxuu "u furan yahay qaabab kala duwan oo macaamil ganacsi iyo qaabab tixgelin si loo kordhiyo qiimaha."
"Tani waxay ku jiri doontaa, laakiin kuma koobna, iibinta tooska ah ee hal ama laba dhisme oo lacag caddaan ah ama qaabab kale oo tixgelin ah; iibinta qayb ka mid ah sinnaanta lammaane; ama kiraynta dhisme adag."
In kasta oo lacag badan la geliyey, haddana aqalka dhirta lagu koriyo ee Daawada Hat weli lama dhammayn.
"Kharashaad raasumaal oo dheeraad ah ayaa loo baahan yahay si loo dhammaystiro xarunta, laakiin qiimaha waxaa go'aamin doona iibsadaha ujeeddadiisa," agaasimaha maamulka Colliers International Matt Rachiele ayaa MJBizDaily ugu sheegay email ahaan.
"Waxaan ka helnay hagitaan hordhac ah injineerada. Ilaa hadda, qiimaha lagu dhammaystirayo dhammaan tas-hiilaadka isticmaalka qaarkood ee aan marijuana ahayn ayaa laga yaabaa inay aad uga yar tahay 10% kharashka, laakiin si ay uga gudubto ujeeddadii hore ee loogu talagalay, waa inay kharash badan ku bixisaa lacag ah. "
Rachiele wuxuu sheegay in lix ka mid ah 37 bay ee dhismaha weyn la dhammaystiray lixda kalena qayb ahaan la dhammaystiray.
Dukumintiga xayeysiinta ayaa yiri: "In kasta oo markii hore loogu talagalay in lagu dhammaystiro xarun caafimaad oo heer sare ah oo caafimaad leh, dhismaha iyo qalabka la xiriira ayaa si fudud loogu adeegsan karaa adeegsiyo kala duwan oo ballaaran."
Matt Lamers waa tifaftiraha caalamiga ah ee Cannabis Business Daily, oo ku yaal meel u dhow Toronto. Waxaad kula xiriiri kartaa isaga oo adeegsanaya [Ilaalinta Email].
Waxaan rajeynayaa in qof uu ka fiirsado sababta baaxadda suuqa xashiishadda Kanada ay aad ugu badan tahay. Kobcinta sharci -darrada (aan shatiga lahayn) ama canshuur xad -dhaaf ah ma sharxi kartaa dhibaatooyinka qaarkood?
Waxaan jeclaan lahaa inaan arko Canada oo cannabis u dhoofisa Illinois. Dulinimada hunguriga ah ee halkaas joogta ayaa lacag badan iyo macaash ka qaata macaamiishooda. Waxay ka maqan yihiin anshax ama anshax ganacsi. Makhluuqyada noocan oo kale ah waa in la xidhaa.
Ganacsiga Cannabis Daily-isha ugu aaminka badan wararka maalinlaha ah, oo ay si gaar ah u qoreen saxafiyiinta xirfadleyda ah ee ka shaqeeya warshadaha. wax dheeri ah baro